Jwxo-shiil: Jamhuuriyadii Somaliya Maxaan ka Qaban Karaa? – Rasaasa News
Jwxo-shiil: Jamhuuriyadii Somaliya Maxaan ka Qaban Karaa?
Jul 18, 2010 Jwxo-shiil: Jamhuuriyadii Somaliya Maxaan ka Qaban Karaa?
Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee London, ayaa joojiyey maalintii khamiista ahayd shir ay qabanayeen saraakiil ka tirsanaan jiray Jamhuuriyadii Somaliya iyaga oo ku qadhaabsanaya magaca ururka ONLF si ay colaad horleh ugu abuuraan dadweynah Somalida Ogadeeniya.
Mahadi ha ka gaadhee Jaaliyada ayaa markii ay ogaatay in uu jir shir lagu shirqoolayo dadweynaha Somalida Ogadeeniya, oo ay wataan saraakiil matalaya beelo iyagu xun wadahadalka nabada ee uu qaatay ururka ONLF iyo waliba heshiiska uu la galay ururka Somali galbeed dawlada Itobiya.
Ka dib kolkii ay boolisku ka joojiyeen hoolkii shirka lagu dhigi lahaa, ayaa waxaa la baajiyey shir ay beesha Sade Mareexaan lahayd waxaana hoolkii la siiyey kooxda Jwxo-shiil iyo saraakiishii Jamhuuriyada Somaliya. Shirka ayaa ahaa qarsoodi, dadka telefoonka lagu hagayey, qaarkooda aan gaadiidka wadanina dhalinyaro la baryey ay soo daadgureeyeen. Shirka waxaa yimid dad u badan beesha Jwxo-shiil iyo beesha Mareexaan, tiradooda guudna waxay ahaayeen 35 ruux.
Beelahan xumo doonka ah, ayaa waxaa horsocda Jwxo-shiil, oo ay ku lamaan yihiin saraakiil ka tirsanaan jiray xukuumadii M/w Maxamed Siyaad Bare. Waa markii 1aad ee ay saraakiil ka socda beelaha kale ee Somalidu soo dhex istaagan shir lagu qanayo magaca ONLF, kaas oo ay u arki jireen in uu yahay magac beeleed.
Jwxo-shiil, ayaan isagu waligii maskaxdiisa lagga dhaadhicin karin in ay Ogadeniya ay qaadan karto xoriyad kaligeedna istaagi karto. Waxaana uu mar walba ku doodi jiray, inta ay Jamhuuriyadii Somaliyeed ka soo noqonayso aynu dabka wadno. Waxaana muuqata in Jamhuuriyad Somaliyeed aan rajo laga qabin, gabalo iyagu is maamula mooyee, waxaa kale oo haatan Jwxo-shiil, cidlo taagay ururka ONLF, oo wadhadal nabadeed la bilaabay Itobiya, sidaasna waxaa ku soo xidhmaya shilimadii uu beenta ku guran jiray.
Beelaha aadka uga xumaaday nabada ka dhalanaysa dhulka Somalida Ogadeeniya ayaa waxaa ka mid ah beesha Mareexaan, oo iyadu awal hore ku dacwayn jirtay ururka ONLF in uu yahay argagixiso. Ujeeda beesha Mareexaan ay kaga xumaanayso nabada gabalka Ogaden, ayaa ku salaysan hunguri xumo ka haysa gabalada Jubooyinka, oo ay beeshaasi mudo xaaraan ku haysatay haatanse ayna dhacaynin in Absame lagu dacweeyo argagixiso dambe.
Cabdiqaadir xaaji Masale, yaa maqlay waligiis isaga oo u hadlaya ama yimaada shir lagu qabanay magaca ONLF? jawaabtu waa maya.
Hadaba, waxaa socda arimo badan oo ay beeshani wado in ay ku taageerto Jwxo-shiil, oo isagu wata dano hunguri iyo beeleed. Arimahaas waxaa kula wadaaga beelo kale oo aan iyagu wali cadaysanin, laakiin aad uga xun heeshiisyada iyo wadahadalka. Absame waxaa la gudboon in uu indhaha furo, raacdana danihiisa.
TV-ga Aljazeera Ayaa Warbixin ka Soo Diyaariyay Ciidamada Ismaamulka Sool, Sanaag iyo Cayn [SSC]
Jaaliyadda Somalida Ogadeeniya ee Dalka Norway oo Soo Saartay Baaq ay ku Taageerayaan Heshiiska Dhex Maray Dawladda Itoobiya iyo Ururaka UWSLF iyo Wadahadalka Nabada ONLF